एशियाको great महान मरुभूमिहरू जुन तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न यात्रा समाचार
एशियाको महान मरुभूमि
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, सिरिया, एशिया यात्रा
एक मरुभूमि हो लगभग कुनै वर्षा प्राप्त क्षेत्र भनेरयद्यपि यो होइन भनेर हामीले सोच्नुपर्दछ कि मरुभूमिमा कुनै किसिमको जीवन हुँदैन। यसले गर्छ, र त्यहाँ सुक्खा मरुभूमिहरू र लगभग कुनै वनस्पति वा जीवजन्तुहरू छन्, त्यस्तै अरूहरू पनि छन् जुन प्रायः आफ्नै तरिकामा एक बगैचा हो।
जब हामी विश्वको मरुभूमिहरूको नक्सालाई हेर्छौं, तब हामी महसुस गर्छौं कि उत्तर अफ्रिका र एशियाको धेरैजसो भागहरूमा रेगिस्तानहरूको उल्लेखनीय गाढा रहेको छ। एशियामा करीव तेईस मरुभूमिहरू छन् वा अर्ध-मरुभूमिहरू, पुरानो मरुभूमिहरू र अन्य जुन गठनमा छन्। तर त्यहाँ केहि छन् जो असाधारण र प्रसिद्ध छन् र ती हुन् एशिया को महान मरुभूमिहरु.
1 अरबी मरुभूमि
2 गोबी मरुभूमि
3 कराकुम मरुभूमि
4 कजाइल कुम मरुभूमि
5 टाकला माकन मरुभूमि
6 थार मरुभूमि
यो एक विशाल मरुभूमि हो, को .2.330.000.। वर्ग किलोमिटर, जुन यमनबाट फारसी खाडी र ओमानबाट इराक र जोर्डन जान्छ। मरुभूमि मध्य पूर्व, पश्चिमी एशियामा अवस्थित छ र लगभग पूरै अरब अरब प्रायद्वीपमा पर्छ। यो छ सुख्खा मौसमत्यहाँ रातो टिब्बा, ढीला बालुवा र तापमान जुन looseº डिग्री सेल्सियसको दिनमा पग्लन्छ, र राती स्थिर हुन्छ।
यहाँ बसोबास गर्न वनस्पति र जीवजन्तुका केही प्रजातिहरू ग्रहण गरिएको छ र केही सहरहरूको विकास र निरन्तर मानव शिकारको कारण नष्ट भएका छन्। यो एशियाई मरुभूमि सल्फर, फास्फेट र प्राकृतिक ग्यास र तेल र यो सोचेको हुन सक्छ कि यी गतिविधिहरू ती हुन् जसले यसको संरक्षणलाई जाँचमा राखेका छन्।
यो ओगटेको धेरै ठूलो मरुभूमि हो चीन र मंगोलिया को भाग। हिमालय पहाडहरूले हिन्द महासागरबाट पानी ल्याउने बादलहरूलाई रोकिदिन्छ सुख्खा मरुभूमिलगभग वर्षा बिना। यसको क्षेत्रफल १,२ 1.295 thousand हजार वर्ग किलोमिटर छ र यो एशियाको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि हो.
गोबी धेरै बालुवाका साथ मरुभूमि होइन र प्रायः जसो यसको ओछ्यान चट्टानमा पर्दछ। एकै समयमा यो एक हो चिसो मरुभूमियो पनि स्थिर गर्न सक्दछ र तपाईं हिउँले ढाकेको टिब्बा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सबै किनभने यो उच्च उचाईमा छ, 900 ०० र १1520२० मिटरहरूको बीचमा। -40ºC जाडोमा सम्भावित तापमान र गर्मीमा º०ºC पनि सामान्य हुन्छ।
गोबी ती उजाडस्थानहरु मध्ये एक हो जुन स्थिर छैन र बढ्न जारी छ, र यो छिटो को कारण डरलाग्दो अनुपात मा गर्दछ मरुभूमि प्रक्रिया जुन तपाईले अनुभव गर्नुभयो। र हो, यो प्रसिद्ध छ किनकि यो हो मंगोल साम्राज्यको पालना, त्यो चंगेज खानको।
यो मरुभूमि मध्य एशियामा छ र टर्कीमा यसको अर्थ हुन्छ कालो बालुवा। अधिकांश मरुभूमि तुर्कमेनिस्तानको भूमिमा छ। यो धेरै जनसंख्या छैन र पनि यो धेरै थोरै वर्षा हुन्छ। भित्र एउटा पर्वतीय क्षेत्र हो, बोल्शोई पर्वत, जहाँ ढुone्गे युगका मानव अवशेषहरू भेटिएका छन्, र जो कोहीले यसलाई बढाउने निर्णय गर्नेहरूको लागि स्वागत जुलाहरू।
यो मरुभूमि पनि छ तेल र प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रहरू। वास्तवमा, यहाँ भित्र नरकको प्रसिद्ध ढोका छ, जुन दारजा क्रेटर, एक प्राकृतिक ग्यास क्षेत्र जुन १ 1971 in१ मा ध्वस्त भयो। त्यसबेलादेखि यो स्थायी रूपमा जलाइएको छ जोखिमबाट बच्न: यो diameter meters मिटर व्यास र 69० मिटर गहिरो छ।
अन्तमा, केही सय वर्ष पुराना ट्र्याकहरू यो पार: यो छ ट्रान्स कैस्पियानो ट्रेन यो रेश्मी मार्ग अनुसरण गर्दछ र रूसी साम्राज्य द्वारा निर्माण गरिएको थियो।
कजाइल कुम मरुभूमि
यो मरुभूमि मध्य एशियामा छ र यसको नाम तुर्की अर्थमा छ रातो बालुवा। यो दुई नदीको बीच सहि छ र आज यसले तीन देशहरूको भूमि ओगटेको छ: तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तान। यसको २ 298 thousand हजार वर्ग किलोमिटर छ।
यो मरुभूमि को सबै भन्दा सेतो बालुवा छ र ती अवस्थित छन् केही अण्डरहरू। दुई नदीको किनारमा जसले यसलाई थिच्दछ र ती हाडहरूमा त्यहाँ किसानहरूको केही गाउँहरू छन्।
टाकला माकन मरुभूमि
यो मरुभूमि चीनको बीचमा छ, सिन्जियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य भएको क्षेत्र। यो उत्तर र पश्चिममा पहाडहरूले घेरिएको छ र गोनी मरुभूमि पनि यसको पूर्वमा घेरिएको छ। यसले 337 XNUMX हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ओगटेको छ र यसको टिब्बाको 80०% भन्दा बढता लगातार परिदृश्य परिवर्तन गर्दै।
चीनले एक राजमार्ग बनाएको छ लुन्टाइलाई होतानसँग जोड्दै, दुई शहरहरू। गोबी मरुभूमि जस्तै, हिमालयले वर्षा बादलहरूलाई बाहिर राख्छ, त्यसैले यो बरु सुख्खा मरुभूमि हो, र जाडोमा तापमान २० डिग्री सेल्सियस भन्दा कम हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै कम पानी छ त्यसैले ओस मूल्यवान छ।
अल थार को रूप मा परिचित छ महान भारतीय मरुभूमि र यो सुक्खा क्षेत्र जस्तो कि कार्य गर्दछ भारत र पाकिस्तान बीच प्राकृतिक सीमा। यो उपोष्णकटिबान मरुभूमि हो र यदि हामी प्रतिशतको बारेमा कुरा गर्ने हो भने, यसको %०% भन्दा बढी भारतीय क्षेत्रमा छ जहाँ यसले 80२० हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ओगटेको छ।
थारको सुक्खा हिस्सा, पश्चिम र अर्ध मरुभूमि भाग, पूर्वमा टिब्बा र केही अधिक वर्षा भएको छ। धेरै जसो यो भारतीय मरुभूमि हो टिब्ली परिवर्तन तिनीहरू धेरै हावाका कारण राक्षस मौसम भन्दा धेरै अघि सर्दछन्।
यस मरुभूमिमा एक नदी छ, केवल एक, लुनी, र थोरै वर्षा हुन्छ जुन यो जुलाई र सेप्टेम्बर बीचमा हुन्छ। त्यहाँ केहि छन् नुन पानी ताल जुन पानीले भरिन्छ र सुख्खा मौसममा हराउँछ। दुबै पाकिस्तान र भारतले केही क्षेत्र तोकेका छन् "संरक्षित क्षेत्र वा प्राकृतिक अभयारण्यहरू"। मृग, गजल, सरीसृप, जंगली गधाहरू, रातो फ्याक्स र विभिन्न किसिमका चराहरू यसमा बसोबास गर्छन्।
थारको खासियत छ कि यो संसारमा सबैभन्दा बसोबास मरुभूमि हो। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, सिन्धु र कोल्हीहरू बसोबास गर्छन्, कोही भारतमा, कोही पाकिस्तानमा, प्रति वर्ग किलोमिटर 83 XNUMX व्यक्तिको दरमा जो पशुधन र कृषिलाई समर्पित छन् र उनीहरूको सांस्कृतिक जीवन छ जसमा लोक चाडपर्वहरू समावेश छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » एशियाको महान मरुभूमि
टिटो अरमान्डो एजीरो एरियस भन्यो
धेरै राम्रो जानकारी
TITO ARMANDO AGÜERO ARIAS लाई जवाफ दिनुहोस्
विदेश यात्रा को लागी उपयोगी सल्लाह